Izindaba - U-Enviro noMichelin bayavumelana ngemibandela yokubambisana kwamasu
U-Enviro noMichelin bayavumelana ngemibandela yokubambisana
I-Stockholm-Scandinavia Environmental Systems (i-Enviro) neMichelin sebeyiphothulile imininingwane yobudlelwano obusetshenzisiwe bokusebenzisa kabusha amasondo, ezinyangeni eziyisithupha kamuva kunalokho obekulindelekile ekuqaleni.
La maqembu womabili manje asefinyelele esivumelwaneni ngemigomo eyisisekelo yokusungulwa kwesikhungo sokusebenzisana sokusebenzisa amathayi ngokuhlanganyela kanye nesivumelwano ngesivumelwano selayisense esilawula imigomo yokusetshenziswa kobuchwepheshe be-Enviro tire pyrolysis. I-Enviro yamenyezelwa ngoDisemba 22.
Lezi zinkampani zombili zamemezela ukusebenzisana okuhlelwe ngo-Ephreli, ngenhloso yokuqedela ukuthengiselana ngoJuni, ngenhloso yokusebenzisa ubuchwepheshe be-Enviro ukwenza kabusha izinto zenjoloba ezilahlwayo. Njengengxenye yokuthengiselana, iMicrosoft ithole isabelo se-20% enkampanini yaseSweden.
Ngokwemibandela yesivumelwano, iMichelin manje inelungelo lokwakha isizinda sayo sokusebenzisa kabusha ngokususelwa kubuchwepheshe buka-Enviro.
Lapho kusungulwa ifektri enjalo, iMicrosoft izokhokhela i-Enviro inkokhelo engaguquguquki yesikhathi esisodwa, engaguquki, futhi ikhokhe amaroyali ngokususelwa kumaphesenti okuthengisa kwemboni.
Ngokwemigomo ye-Enviro, isivumelwano selayisense sizosebenza kuze kube ngu-2035, futhi inkampani nayo inelungelo lokuqhubeka nokusungula izikhungo zokuphinda zisetshenziswe namanye amaqembu.
Usihlalo we-Enviro u-Alf Blomqvist uthe: "Yize kubhebhetheka lolu bhejane nokunye okwalandela, manje sesikwazile ukuphothula isivumelwano sokusungula ubudlelwano obusebenzayo noMichelin."
U-Blomqvist uthe lesi sivumelwano “siyingqophamlando ebaluleke kakhulu” kwi-Environmental Systems yaseScandinavia, futhi “futhi siqinisekisa ubuchwepheshe bethu obubaluleke kakhulu.”
Uthe: “Onyakeni lapho izimo zezempilo ezazingakaze zibonwe khona zenza kwaba nzima ngathi ukuthi 'sihlangane ndawonye' futhi sihlele inkambo yokubambisana kwethu esikhathini esizayo, sakwazi ukufinyelela ezivumelwaneni ngalezi zimiso ezibalulekile.”
Yize izingxoxo bezivinjelwe ngenxa yeCovid, uBlomqvist uthe ukubambezeleka kunikeze iMichelin nabanye abakhiqizi bamazwe omhlaba isikhathi esithe xaxa sokuhlola ikhabhoni emnyama etholwe ngu-Enviro.
Lesi sivumelwano singaphansi kokuvunywa kokugcina ngabaninimasheya bakwa-Enviro emhlanganweni ojwayelekile ongejwayelekile ozoba ngoJanuwari wonyaka ozayo.
Thola izindaba zakamuva ezithinta imboni yenjoloba yaseYurophu kusuka ezindabeni zokuphrinta nasezindabeni eziku-inthanethi, kusuka ezindabeni ezinkulu ukusula ukuhlaziywa.
@ 2019 I-European Rubber Journal. wonke Amalungelo Agodliwe. Xhumana nathi European Rubber Journal, Crain Communication LTD, EC2V 8EY, 11 Ironmonger Lane, London, UK
Isikhathi Iposi: Jan-16-2021
Iqoqo Le-Pyrolysis Plant, ITire Pyrolysis, Isitshalo Esiqhubekayo sePyrolysis, Indawo Yokuhlanza Iplastiki, Umshini Wokusebenzisa Kabusha iTire, Umshini We-Plastic Recycling,